"ကြောင် (တိရစ္ဆာန်)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ကြောင် (တိရစ္ဆာန်)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ကြောင် (တိရစ္ဆာန်) (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၉:၁၇၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ
၂၁၃ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၃ လ
I'll edit this page when I have time.
၀၉:၀၅၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၉:၁၇၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(I'll edit this page when I have time.)
[[File:Cat with Burmese pagoda background, Yangon.jpg|thumb|ရန်ကုန်မြို့မှ ကြောင်တစ်ကောင်]]
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကြောင်များသည် လူတွေရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှု ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ ရက်စက်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု တို့ကိုခံရပြီး ကြောင်များ၏ ကံကြမ္မာဟာ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ကြောင်များဟာ အသိရခက်ခြင်းကြောင့် ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်များအဖို့တော့ စိတ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ခွေးများက သူတို့ပိုင်ရှင် သူတို့ရဲ့ သခင်ကိုချစ်လျှင်ချစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားစွာပြတတ်ကြပေမယ့် ကြောင် များကိုတော့ ဘယ်အရာကိုမှအတင်းအကြပ်စေခိုင်းလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ သူတို့စိတ်ဆန္ဒ ရှိမှသာလျှင် သူတို့လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများပါပဲ။ ကြောင်ပိုင်ရှင် သခင်ကိုလည်း တွယ်ကပ်မနေကြဘဲ လွတ်လွတ်လပ်⁠လပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူများသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ အိမ်မှာ ကြောင်မွေးထားပြီဆိုလျှင် ကြောင်ပိုင်ရှင် ကြောင်သခင်များက ကြောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြောင်များကသာ ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်ကို ပိုင်ဆိုင်သွားကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူတွေက အလိုအလျောက်ပဲ ကြောင်များကြောင်များရဲ့ အလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးနေရတော့ပါတယ်။▼
စာရေးဆရာ [[ဆာဝေါလ်တာစကော့တ်]]က “ကြောင်များဟာ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ သတ္တဝါများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများအပြားရှိနေ တယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကြောင်များကို ကိုင်တွယ် မွေးမြူတဲ့အခါမှာ သတိရှိရပါမယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။▼
▲ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကြောင်များသည် လူတွေရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးမှု ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ ရက်စက်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု တို့ကိုခံရပြီး ကြောင်များ၏ ကံကြမ္မာဟာ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ကြောင်များဟာ အသိရခက်ခြင်းကြောင့် ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်များအဖို့တော့ စိတ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ခွေးများက သူတို့ပိုင်ရှင် သူတို့ရဲ့ သခင်ကိုချစ်လျှင်ချစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားစွာပြတတ်ကြပေမယ့် ကြောင် များကိုတော့ ဘယ်အရာကိုမှအတင်းအကြပ်စေခိုင်းလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ သူတို့စိတ်ဆန္ဒ ရှိမှသာလျှင် သူတို့လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများပါပဲ။ ကြောင်ပိုင်ရှင် သခင်ကိုလည်း တွယ်ကပ်မနေကြဘဲ လွတ်လွတ်လပ်⁠လပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူများသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ အိမ်မှာ ကြောင်မွေးထားပြီဆိုလျှင် ကြောင်ပိုင်ရှင် ကြောင်သခင်များက ကြောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြောင်များကသာ ကြောင်ချစ်သူ ကြောင်ပိုင်ရှင်ကို ပိုင်ဆိုင်သွားကြပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူတွေက အလိုအလျောက်ပဲ ကြောင်များ
ရဲ့ အလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးနေရတော့ပါတယ်။
စာရေးဆရာ [[ဆာဝေါလ်တာစကော့တ်]]က “ကြောင်များဟာ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့
▲သတ္တဝါများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများအပြားရှိနေ တယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကြောင်များကို ကိုင်တွယ် မွေးမြူတဲ့အခါမှာ သတိရှိရပါမယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကြောင်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်အကြီးစားများဖြစ်ကြတဲ့ [[ကျား]] ၊ [[ခြင်္သေ့]] များဟာ မီရာဆစ် (Miacids) [[အသားစားသတ္တဝါ]]မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြောင်ရိုင်းများကို မျိုးစိတ်အရ [[ဥရောပကြောင်ရိုင်း]] ၊ [[အာဖရိကကြောင်ရိုင်း]] ၊ [[အာရှကန္တာရကြောင်ရိုင်း]]ဟု အမျိုးအစား (၃) မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။
[[File:4 cats sleeping in Myanmar.jpg|thumb|left|ကြောင်မ (ဝဲဘက်) နှင့် သူမ၏ ကြောင် ၃ ကောင် အတူတူအိပ်စက်နေကြစဉ်]]
[[အီဂျစ်]]လူမျိုးများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀⁠၀၀ ကျော်လောက်ကတည်းက ကြောင်များကို [[အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်]]အဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးများက ကြောင်များကို သီးသန့်နေရာပေးအလေးထားကာ မွေးမြူခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်ဦးခေါင်း နဲ့ လူခန္ဓာကိုယ်ရှိသော [[နတ်ဘုရား]] Bast ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြောင်ကိုအီဂျစ်ဘာသာဖြင့် mau ဟုခေါ်ပြီး သိမြင်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ နေ့အချိန်မှာ ကြောင်တွေရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ နေအလင်းရောင်ကိုသိမ်းဆည်းထားကာ ညအချိန်မှာ လူသားတွေကိုဘေးရန်ကင်းရှင်းအောင် အလင်းရောင်ပြပေးတယ် လို့အယူရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်သေဆုံးသွားခဲ့လျှင် အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်များ အားလုံးက မိမိတို့ရဲ့ မျက်ခုံးမွေးများကိုအပြောင်ရိတ်ပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို ပြသတဲ့ဓလေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ အဲ ဒီခေတ်အခါက အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ကြောင်တစ်ကောင်ကို သတ်လျှင် သေဒဏ် ပေးတဲ့ ဥပဒေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်အခါက ကြောင်များဟာ အခွင့်ထူးခံ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အလယ်ခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကြောင်များရဲ့ကံကြမ္မာ ဟာ အစစ အရာရာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကြောင်များအတွက် အဆိုးဝါးဆုံးကံကြမ္မာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်များဟာ စုန်း ၊ တစ္ဆေ များရဲ့ အပေါင်းအဖော်များဖြစ်ကြပြီး စုန်း တစ္ဆေ များရဲ့ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ကျိန်စာသင့်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြတယ်လို့ အယူသီးခဲ့ကြပါတယ်။ စုန်း ၊ တစ္ဆေ များက သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကြောင်များအယောင်ဆောင်ထားပြီး လူတွေကိုလှည့်စား နေခဲ့ကြတယ်လို့ အယူရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်တယ် လို့အယူရှိကြပြီး ကြောင်အနက်များကို သတ်ပစ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ [[စိန့်ဂျွန်ပွဲတော်]] (Saint John Festival) မှာအနက်ရောင်ကြောင်များကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်တဲ့ ဓလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ ဒီနေ့ခေတ်အချိန်အခါကစပြီး အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများ လို့ အချို့သောလူများက ဆက်လက်အယူသီးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြတယ်လို့ အယူသီးခဲ့ကြပါတယ်။ စုန်း ၊ တစ္ဆေ များက သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကြောင်များအယောင်ဆောင်ထားပြီး လူတွေကိုလှည့်စား နေခဲ့ကြတယ်လို့ အယူရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်တယ် လို့အယူရှိကြပြီး ကြောင်အနက်များကို သတ်ပစ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ [[စိန့်ဂျွန်ပွဲတော်]] (Saint John Festival) မှာအနက်ရောင်ကြောင်များကို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်တဲ့ ဓလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ ဒီနေ့ခေတ်
အချိန်အခါကစပြီး အနက်ရောင်ကြောင်များဟာ မကောင်းဆိုးဝါးများ လို့ အချို့သောလူများက ဆက်လက်အယူသီးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
[[ဥရောပတိုက်]]မှာ ကြောင်များကိုညှင်းဆဲသတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာပဲ [[အရှေ့အလယ်ပိုင်း]]ဒေသမှာတော့ ကြောင်များဟာ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ အိမ်မွေးအကောင်လေးများ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/668919" မှ ရယူရန်